Waa la daabacay22.06.2022
Waa maxay arrimaha lagaa doonayo in aad samayso marka aad Helsinki u soo guurto? Boggan waxaad ka hubin kartaa, meelaha aad ka samaysan karto arrimaha ruqsadaha degane ahaanna aad isaga diiwaangelin karto. Helsinki waxaad si fudud hal meel uga heli kartaa adeegyada hawlwadeennada iyo talabixin lacag la’aan ah oo ku saabsan u soo guurista Finland.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: U soo guurista Finland .
Talo-bixinta Chat (Helsinki-info)Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha .
Ogsoonoow, in warqadaha dibadda laga keenay ay ahaadaan kuwa loo turjumay af finnish, iswiidhish ama ingiriis islamarkaasna la sharciyeeyay. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciyeeynta dukumentiyada iyo diiwaangelinta ajaaniibta ka aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degane . Waxaa kale oo aad arrintan wax ka weydiisaa wakiilka dalkaada ee Helsinki jooga.
talabixinta canshuurista la xiriirta
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaInternational House Helsinki
Goobta adeegga IHH ee dadka u soo guuraya Finland Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa